यसो गरेर हेर्नुहोस्, बदलिनेछ तपाईको जीवन – Sawal Nepal ||The Power of Information
काठमाडौं । योगा गर्नका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा तपाईंको शरीर र मन हो । योगले शान्ति दिन्छ । जब तपाईं आफै भित्र शान्ति हुन्छ तब तपाईं अरूसँग शान्तिसंग बाँच्न सक्नुहुन्छ । यांत्रिक अभ्यास भन्दा ज्ञान राम्रो हो । ज्ञान भन्दा राम्रो ध्यान हो ।
योग स्वतंत्रताको बाटो हो , योगलाई निरंतर अभ्यास गर्नुभयो भने डर , पीड़ा र एक्लोपनबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान सबेरै उठ्नुहोस्, योगा गर्नुहोस्, मन परे पूजापाठ पनि गर्नुहोस्। दिनमा ३० मिनेट योगा ले तपाईंको जीबन मा धरै परिबर्तन आउछ । एउटा स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीरको कनेक्शन नै सुखी जीवनको साँचो छ।
कपाल प्रत्यारोपण के हो, रोपेको कपाल काट्न मिल्छ ?
लसुन किन खाने ?
मुखमा घाउ आयो, अब के गर्ने ?
चिसोले जोर्नी दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् घरेलु उपचार विधी……
तपाइलाइ थाहा छ बेसारका यति धेरै फाइदा ?